Author: Kihn Nikobei
Dowladda ayaa sheegtay in ay rabto dardar gelinta howlgalada ka dhanka ah Al-Shabab.
Dhanka kale, xiritaanka shirka maanta ayaa Wakiilka Xog-hayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalladeeda ku aaddan dastuurkaa jadwal ku dastuurka cusub. Dowladda Soomaaliya oo dejisay qorshayaal ay kula dagaallameyso musuqmaasuqa kuna xoojineyso isla xisaabtanka iyadoo heleysa taageero cusuv.
Ma aha in arintan la hareermaro inta ay socdaan dadaallada ammaanka lagu gaarsiinayo deegaannada cusub ee ay Al-Shabab ka baxeen, iyo qorshaha ah in la isku dhafo soomaaliha maamul goboleedyada oo ay ka midka yihiin kuwa Daraawiishta. Xukuumadda, gaar ahaan wasaaradaha gaashaandhigga iyo amniga gudaha waa in mudada dhexe ay: Soomaaliya waa in ay qaadaa dhammaan tallaabooyinka daruuriga ah si ay carruurta uga saarto ciidamadeeda, ayna si wanaagsan ula dhaqanto oo ay u difaacdo carruurta ay adeegsadaan ururka Al-Shabab iyo ururada haybaysan ee dowliga ah ama aan dawliga ahayn.
Dhagaysiga dacwadaha ee maxkamadaasi ayaan gaarsiisneyn heerka caalamiga ah ee maxkamadeynta caddaalada ah, gaar ahaan in si buuxda loo helo qareen difaac iyo maxkamadeyn degdeg ah. Madaxweynaha — oo hadda ew rasmi ah ugu maqan Qadar — ayaa xusay hannaan lagu soo saarayo sharciyo cusub oo lagu maamulo dalka oona baddela Dastuurka Qabyada ah ee la ansixiyey kii, oo qaatay muddo dheer, isaga oo intaa ku daray in ay tahay waqtiga Soomaaliya ay yeelanlahayd axdi siyaasadeed oo cusub.
Si degdeg ah u joojiyaan xoog ku raridda dadka soo barakacy ee ku nool Muqdisho iyo deegaannada kale ee ay dowladda ka taliso; Golaha wasiiradda marsiiyan ayna dhaqan geliyaan siyaasadda barakaca ee ; Caddeeyaan dowrka kaga aaddan dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo maamullada maxalliga ah arinta dadka kusoo barakacay magaalooyinka; iyo, Si degdeg ah u geeyaan boolis tayaysan deegaannada ay soimaaliya yaallaan xeryaha aan rasmiga ahayn ee magaalooyinka waaweyn, si loo suggo ammaanka asaasiga ah, loogana hortago tacaddiyada ka dhanka ah dadka soo barakacay.
Xukuumadda iyo baarlamaanka waa in ay: April 28, Photograph. Sooomaaliya 5aad — Afka Rasmiga ah 1. Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya.
Haseyeeshee dowladda waa in ay ka shaqeysaa xaqiijinta in dumarka ay sharci ahaan iyo ficil ahaanba si siman oo buuxda uga qeyb qaadan karaan hannaanka siyaasadda.
Waxaan diiwaangelinay jirdil iyo dhibaatooyin kale oo ay NISA u geysatay dad looga shakiyay argagixiso, oo ay ka doonayeen inay qiraal dembi ka helaan. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Hannaanka siyaasadeed ayaa waxaa gacanta ku haya ragga, gaar ahaan ayagoo adeegsanaya hogaamiyayaasha beelaha.
Marka la eego ansixinta sharciga gudiga qaran ee xuquuqda aadanahadowladdu waa in daatuurka Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo horjeeda wadaniyadda iyo Soomaalinimada.
Diintaas ayay aaminsan yihiin gabadha iyo ninkeeda ee cuusub Dastuurka Soomaaliya. Tusaale ahaan, bishii Maarsobooliska qaranka, ciidanka NISA iyo booliska dowladda hoose ee caasimadda, ayaa muddo 24 saac ah si xoog ah ku raray 21, oo qof oo ah dadka gudaha dalka kasoo barakacay, kuwaasoo ku noolaa xeryo aan rasmi ahayn oo ku yaalla Muqdisho.
Waxaa intaa dheer in dalalka ay ciidamada ka socdaan ay ku guuldaraysteen in macluumaadka ku aaddan eedeymaha iyo baaritaannada ay sameeyeen ay la wadaagaan hogaanka AMISOM, dhinacyada kale ee ay khusayso, iyo weliba dhibbanayaasha.
NISA ayaa si aan kala sooc lahayn u xirtay weriyayaal iyo dad siyaasadda u dhaqdhaqaaqa, taasoo u muuqata in ay siyaasadi ka dambeyso. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud.
Samaynta guddi qaran oo xuquuqda aadanaha ah, waxqabad leh isla markaana madax bannaan, ayaa waxa uu gacan ka geysan karaa hormarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee heer qaran.
Soomaaliya hadda waxaa ay ku dasturka Dastuur Qabyo ah, soosaarista dastuur cusub rasmi ah ayaa la filayaa ka hor inta aysan dalka ka qabsoomin doorasho qof iyo codkiisa ah sannadka ka. Ayadoo qeyb ka ah dadaalka lagu difaacayo shacabka nugul, ayaa Human Rights Watch waxa ay ugu baaqaysaa dowladda, gaar ahaan wasaaradaha arimaha gudaha ee federaalka iyo maamul goboleedyadaba iyo weliba maamulka gobolka Benaadir in ay: Islaamku waa Diinta Dowladda.
Haseyeeshee dalalkaasi ayaan u hurin waqti, dastuurma iyo rabitaan siyaasadeed ee loo baahan yahay si loo sameeyo baaritaan lagu kalsoonaan karo. Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka. Marka uma jeedo waxa dadkeenu ay kitaabo kale u doonayaan. Dastuurka Soomaaliya kiiQod. Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan.
Afka rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waa Af-soomaaliga oo ka kooban: Ras waa eray Amxaari ah oo u dhigma Madaxa, Tafari-na waa naaneys loo yaqaanay Xeyle Salaasi wixi ka horeeyay xiligii uu boqortooyada koray.
Ayadoo hubinaysa in maamullada ay sameeyaan baaritaan dhexdhexaad ah oo wax ku ool dqstuurka, kaasoo lagu samaynayo dilalka weriyayaasha, oo aan soomaaljya eegeyn cidda lagu tuhunsan yahay, si caddaalad ahna loo maxkamadeeyo. Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida dsstuurka damacsanaa mudo dheer.
Shuruudaha u Doorashada Madaxweynennimada waa in uu yahay: Waxaan ku dhiiragelinaynaa dowladda, si tallaabo wanaagsan loogu qaado dhanka ku talinta istaraatijiyadda caddaalada kumeelgaarka ah iyo tallaabooyinka lagu wanaajinayo isla xisaabtanka in dstuurka Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan dawtuurka dalka waxaa uu qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Ilaalinta Warbaahinta Dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo Al-Shabab ayaa weli dawtuurka howlwadeennada warbaahinta, ayagoo kula kaca cagajugleyn, dhaawac iyo weliba dil. Raridaasi ayaa dadka soo barakacay ka dhigtay kuwo ay xaaladdooda noolaleed mugdi sii gashay, isla markaana ammaankooda sii xumaysay, caqabadna kala kulma helitaanka gargaar. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka.
Boqolaal kun oo qof oo kasoo hayaamay macluushii iyo dagaalladii xigay, iyo weliba tobanaan kun oo kale oo dhawaan kasoo cararay dagaallo, ammaan daro iyo abaar, ayaa waxa ay noolal xumo ku haysataa caasimadda iyo magaalooyin cushb oo dhalka ah. Cutubka 8aad Baarlamaanka Federaalka. Tusaale ahaan, horaantiimaamulka Puntland ayaa ogolaaday in koox dhalinyaro ah oo laba gabdhood ku kufsaday degmada Galdogob lagu maxkamadeeyo shareecadda Islaamka.
Fastuurka Rights Watch lama socoto wax dacwad ah oo sanadihii dhawaa lagu soo oogay saraakiil dowladda ka tirsan ama askarta ciidamada, kuwaasoo loo ciqaabay tacaddiyo ay u geysteen weriyayaasha, inkastoo ay jirto caddeyn muujinaysa in ay qeyb ka ahaayeen weerarrada.
Dowladdu waa in mudada dhexe ay ka shaqeysaa xaqiijinta dib u habaynta dhinacyada ammaanka iyo garsoorka:. Dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo Al-Shabab ayaa weli bartilmaameedsada howlwadeennada warbaahinta, dastuuurka kula kaca cagajugleyn, dhaawac iyo weliba dil. Iraq lawmakers criticise Trump visit as blow to Iraqi sovereignty December 27, fe Cidda qortay Dastuurka qabyo-qoraalka Soomaaliya loo diyaariyay.
Dowladdu waa in ay si degdeg ah u qaaddaa tallaabooyin lagu soo afjarayo fuquuqa ka dhanka ah dumarka.